Ny doka amin'ny Twitter dia manampy mpanaraka amin'ny $ 0.823 tsirairay avy | Martech Zone
Asabotsy 9 Febroary 2013 Alahady 10 Febroary 2013 Douglas Karr
Hatramin'ny volana septambra dia nanao teti-bola kely izahay hahazoana mpanjohy Twitter amin'ny iray amin'ny kaontinay. Tsy izany mpanaraka karama, tena izy io Doka amin'ny Twitter mikendry sy mampiroborobo ny kaonty amin'ireo mpampiasa hafa. Ny dokam-barotra amin'ny Twitter dia mamela anao hampiroborobo ny kaonty na hampiroborobo ny bitsika. Izahay dia mbola tsy nanandrana ity farany, fa ny valin'ny fampiroboroboana ny kaonty dia mazava sy mitohy.
Ity kaonty ity dia nitombo 30% teo ho eo haingana tamin'ny fampiasana ny fampiroboroboana ny Twitter fa tsy ny tsy misy. Nanampy mpanaraka 887 izahay ho an'ny $ 729.81 = vidin'ny 82.3 cents isaky ny mpanaraka. Kaonty misy marika ity fa tsy an'ny tena manokana, ary mazava sy mazava ny famaritana ny kaonty - tsy misy zavatra manjavozavo na manja. Tsy misy zavatra manaitra.
Mendrika ve izany? Angamba. Amin'ity tranga ity, manandrana mampitombo ity vondrom-piarahamonina ity izahay ary mila kaonty mifandraika izay mahasoa sy mandray anjara. Tsy mitady tarehimarika marobe izahay fa tena mitady hahita sy manampy ny mpikambana marina. Ny habaka ampitomboinay dia tsy mitaky vola ampy hahazoana fiverenana tsara amin'ity fampiasam-bola ity amin'izao fotoana izao fa matoky izahay fa amin'ny ho avy izany.
Nampiroborobo ny kaontinao tamin'ny alàlan'ny Twitter ve ianao? Mahazo valiny mitovy amin'izany ve ianao?
Tags: kaonty twitter nampiroboroboTwitterdoka amin'ny twitterfampiroboroboana ny twitter
11 Mey 2013 tamin'ny 1:51 hariva
Te-hihaino ny hamaritana ny masontsivana amin'ity fampielezan-kevitra ity aho. Nahita fahombiazana tamin'ny dokambarotra Facebook aho fa tsy mbola niditra an-tsehatra tamin'ny tontolon'ny dokambarotra Twitter.
12 Feb 2013 tamin'ny 11:03 maraina
Etazonia fotsiny sy teny fanalahidy vitsivitsy kendrena, Allison - ny sisa amin'ny fampielezan-kevitra dia ny fametrahana teti-bola isan'andro fotsiny ary mihazakazaka miaraka aminy.